Xisbiga Wadani oo taageerayaal cusub ku soo dhoweeyey Magaalada Brisol |
Xisbiga Wadani oo taageerayaal cusub ku soo dhoweeyey Magaalada Brisol
Bristol (Gabiley.net) Waxa xalay xaflad lagu qabtay Hotel Holiday Inn ee magaalada Bristol, xafladaas oo lagu soo dhaweynayay taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbiga Wadani.
Xafladan oo ugu horeyn ay ka so qayb galeen dhammaan taageerayaasha Xisbiga Wadani ee magaalada Bristol, Guddoomiyaaasha xisbiga ee magaalooyinka UK, iyo waliba afhayeenka qaarada Yurub. Waxa sidoo kale ka soo qayb galay Guddoomiyaha Xisbiga Wadani ee UK Mr. Maxamed Cali iyo wafti ka socday xisbiga Wadani oo uu hogaaminayay Wasiirkii hore ee Beeraha ee dawladdii UDUB Mr. Aadan Dhoolayare oo ka soo kicitimay magaalada Hargeisa.
Ujeedada ugu weyn ee xafladan waxa ahayd sidii soo dhoweyn iyo maamuus loogu samayn lahaa Suldaan Cali Saleebaan Cawaale, siyaasi Maxamuud Aw Ciise iyo Aqoonyahan Xasan Cabdillaahi Iimaan oo dhammaantood ka soo jeeda Gobolka Maroodi Jeex iyo gebi ahaanba hablaha Gaaroodi oo iyaguna ku soo biiray xisbiga.
Xafladaas waxa sidoo kale guddoomiyaha Wadani ee UK lagu wareejiyey gaadhi aan noociisa xaflada laga sheegin oo uu wareejiyey Jaamac Cabdi Saleebaan (Maacuun) iyo waliba in Bristol laga rabo qaadhaanka xisbiga oo dhan 100,000 (Boqol kun oo Pound) iyo afar gaadhi, halkaas oo dadkii isku qoray oo ay qaar bixiyeen shan shan kun magacyadooda laga sheegay.
Xafladaas oo dhammaystiran waxaad naga filaataan iyadoo muuqaal ah dhawaan.